Halyey kooxda Arsenal ah oo ammaanay saxiixa cusub Chelsea ee Hakim Ziyech – Gool FM
(London) 15 Feb 2020. Waxaa la xaqiijiyay khamiista in Chelsea ay ogolaatay heshiis 36.6 milyan ginni ah oo ay kula soo saxiixato xiddiga heerka caalami ee dalka Morocco Ziyech oo kaga iman doono kooxda Ajax xagaaga soo adan.
Ian Wright ayaa ammaanay saxiixa cusub ee Chelsea Hakim Ziyech wuxuuna tilmaamay in isaga iyo Tammy Abraham ay faa’iido u noqon doonan Blues.
26-sano jirkan ayaa ka mid ahaa xiddigihii Ajax u soo saaray wareega Semi-finalka Champions League xilli ciyaareedkii hore, halyeeyga Arsenal Ian Wright ayaa sheegay inuu noqon doono mid ay ka faa’ido’ Chelsea.
Ian Wright oo ka hadlayay saxiixa cusub kooxda Chelsea ee Hakim Ziyech ayaa wuxuu yiri:
“Warka ku saabsan Ziyech. waxa uu ka mid yahay ciyaartoydan hal abuurka leh markaad daawaneyso Chelsea, gaar ahaan markaad ku daawato gurigaaga, waxaan u maleynayaa inay waxbadan ka filayaan ciyaartoydooda hal abuurka leh”. ayuu Wright u sheegay Premier League Productions.
“Waxaan aaminsanahay in uu noqon doono saxiix heer sare ah, sababtoo ah waxaan ku aragnay bandhigiisii kooxda Ajax”.
Tammy Abraham ayaa qaab ciyaared fiican ku qaatay xilli ciyaareedkan kooxda Chelsea, wuxuu dhaliyay toddobo gool toddobadii kulan ee ugu horeysay, laakiin 2 gool ayuu dhaliyay 9 kii kulan ee ugu dambeysay.